Musa Ukwehlisa isiko PR | Martech Zone
NgoLwesibili, Okthoba 11, 2011 NgoMgqibelo, Okthoba 18, 2014 Douglas Karr
Sethula ingqungquthela yesifunda namuhla futhi ngilalele isethulo se-PR. Ezimayelana Nomphakathi ine ithathe ukonga kwezomnotho, kepha ama-ejensi we-PR athuthukise ubudlelwano obuqinile nabezindaba abakhulu ayachuma. I-ejensi yethu isebenzisane nenkampani, I-Dittoe PR, isikhathi esingaphezu konyaka manje futhi sibe nemiphumela emangalisayo.
Elinye lamakhasimende ethu lalinesiza esisha negunya elingu-zero online, kepha kwakudingeka ukukhiqiza ukufunwa okuningi. I-Dittoe PR ikwazile ukukhomba omagazini bezimboni nama-webazine (izindawo zokushicilela eziku-inthanethi) futhi yathola izindatshana kokuningi kubo ngenyanga yokuqala. Ukufakwa kwendaba kusisizile ukuqhubekisela phambili izinga labo lenjini yokusesha futhi kwandisa ukubonakala komkhiqizo wabo… okuholele emazingeni aphezulu wokuchofoza ezikhangisweni zabo zosesho ezikhokhelwayo.
Ukukhishwa kwabezindaba nakho kuyithuba elimangalisayo. Kuhlanganiswe ne- ukwenza kahle usesho, ukukhishwa kwabezindaba muva nje esikusabalalise kuzwelonke inkampani ye-niche ithole ukubukwa okungaphezulu kwe-1000, isilinganiso sokuchofoza okungu-4%, kanye nama-backlinks angaphezu kwama-30 aqinile esizindeni sabo. Inzuzo lapha bekungezona izinombolo eziphakeme… bekuyizinombolo eziphakeme ezinokubaluleka okuphezulu kakhulu. Ukukhishwa kwabezindaba kushicilelwe ngqo kuzethameli ezifanele. Ukukhishwa kwabezindaba kwaholela abafundi emuva ekhasini elimhlophe nelokufika lapho idatha yethemba yathathwa khona. Siphinde sisebenzise ukukhishwa kwabezindaba kubhulogi yenkampani… ngakho-ke kungukuqukethwe okuhle futhi.
Ekubukeni imbuyiselo yotshalo-mali, izimali ezichithwe ku-PR yendabuko ziye zaba nembuyiselo ephezulu kakhulu ekutshalweni kwezimakethe - ekwazisweni komkhiqizo, ekufinyeleleni kwabathonya, ekuqondiseni nasekuqondiseni ngokungahambisani ngqo, nasekugcineni ukuguqulwa.
Tags: prezimayelana Nomphakathingokwesiko prubudlelwano bomphakathi bendabuko